လုပ်ငန်းသုံးယဉ်, Trucks over 7.5 t ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Hino Iveco Mitsubishi
Pearl white Hino Dutro 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger.ြ...
Pearl white Hino Dutro Truck 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
Hino Dutro Box Truck 2005
Green Hino Dutro Box Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger...
Hino Dutro Truck 2008
Pearl white Hino Dutro Truck 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
၇.၅ တန် အထက် မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် များ
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များစွာ ရှိတဲ့ အထဲမှာ ၇.၅ တန် အထက် ကားများစွာလည်း မြန်မာပြည် အနှံ့မှာ တည်ရှိ နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မစ်ဆူဘီရှီ ၇.၅ တန် များကို motors.com.mm မှာ သီးသန့်ခွဲပြီးတော့ ဖော်ပြ ပေးရ ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီဟာ ဂျပန် အခြေဆိုက် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ မော်တော်ယာဉ် မျိုးစုံ ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ အိမ်စီး ကားများ အောင်မြင် သလို၊ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များလည်း နာမည်ကြီး ပါတယ်။ ယင်းထဲ မှာမှ လူသိ အများဆုံး မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များကို သာ ရွေးချယ် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
မစ်ဆူဘီရှီ လူသိများ ၇.၅ တန်အထက် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
မစ်ဆူဘီရှိ Canter ဆိုတဲ့ ကားကို လူသိများကြ မှာပါ။ သူ့မှာက ၃.၅ တန် အပြင် ၇.၅ တန် အထက် ကား တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူက ၇.၅ တန် အထက် ဆိုတော့ အင်ဂျင် အရွယ်လည်း ကြီးပါတယ်။ ၅၂၄၀ စီစီ အရွယ် အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုပြီး ဒီဇယ် ဆီ အသုံးပြု ကားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင် မော်ဒယ် လော်က အဝင်များ ပါတယ်။ လက်ထိုး ရိုးရိုး ဂီယာ အပြင် အော်တို ဂီယာ အမျိုးအစား လည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။ သူ့ကို ကုန်စိမ်း၊ ကုန် ခြောက် အမျိုးမျိုး သယ်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုကြ ပြီး မြို့ တွင်း အပြင် နယ် ခရီး ကုန် ပစ္စည်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ လည်း အသုံးပြုကြ ပါတယ်။
နောက် တစ်မျိုး ကတော့ မစ်ဆူဘီရှီ ဖူဆို ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂ ဘီးကား နဲ့ ၁၈ ဘီး ကား ဆိုပြီးတော့ ကွဲ သေး ပြီး ၁၂ ဘီးကို ရှေ့လေး နောက်အိတ် လို့ အလွယ်ခေါ်ကြ ပါတယ်။ သူကတော့ ဈေးပို သက်သာ ပါတယ်။ မြန်မာ ကျပ်ငွေ သိန်း ၃၈၀ ဝန်းကျင် ရှိပြီး ဒီဇယ် လောင်စာ အသုံးပြု ကုန်ကားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင်၊ နယ်ခရီး၊ နယ်စပ်၊ ဆိပ်ကမ်း အစရှိတဲ့ နေရာတွေ အားလုံးမှာ အသုံးပြုနေကြ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ကြီး ကားများ ဖြစ်ပါတ်။ ၁၈ ဘီး ကား ကတော့ အရွယ်ပိုကြီး သလို ဈေးလည်း ပိုကြီး ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ကျော် မော်ဒယ် လောက်ကို သိန်း ၆၅၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း ကုန်တင်ပို့ ရေးမှာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြု နေကြ ပါတယ်။
မစ်ဆူဘီရှီ ၇.၅ တန် အထက် ယာဉ်များ ဝင်ရောက်မှု
အရင် တုန်း ကတော့ ၇.၅ တန်အထက် မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များဟာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကနေ ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ ဂျပန် ကားလေလံ ဈေးကွက် ကနေ အလွယ်တကူ ရရှိ နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လေလံ အတွက် အော်ဒါ မှာ ပေးတဲ့ အေးဂျင့် များ ရှိသလို မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ အရောင်း စင်တာ တွေမှာ ဝယ်ယူ ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ မြို့နယ် အသီးသီးက ကား ပွဲစား ဈေးကွက် ကနေ လည်း ဝယ်ယူကြ ပါသေးတယ်။ အများစု ကတော့ တစ်ပတ်ရစ် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီ တစ်ပတ်ရစ် ထဲ က ၇.၅ အထက် တစ်ပတ်ရစ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် မျိုးစုံ ကို Motors.com.mm မှာ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ ဝယ်ယူ နိုင် ပါတယ်။